Emailvision iyo Pinterest: Bixi Tartankaaga Inbox | Martech Zone
Tuesday, April 24, 2012 Sabti, Febraayo 4, 2017 Douglas Karr
Waxaan u maleynayay in tani ay ahayd adeegsi qurux badan oo Pinterest ah sidaa darteed waxaan doonayay inaan la wadaago akhristayaashayada. Dhamaanteen waan ognahay taas Pinterest waa mid ka mid ah mowduucyada ugu kulul maalinta, hadda laga bilaabo illaa 31-ka Maajo, Muuqaalka iimaylka waxay ka caawineysaa suuqleyda inay adeegsadaan boodhka ogeysiiska si ay u helaan aqoonsi dheeraad ah - iyo natiijooyin - ololahooda suuqgeynta suuqgeynta e-mailka
Suuqleyda waxaa lagu casuumay inay ku dhejiyaan emaylkooda hal abuur leh Bixi sanduuqaaga. Halkan, bulshada Pinterest (iyo kuwa kale ee suuqleyda ah) way eegi karaan oo "jeclaan karaan" ololahooda. Dabcan, garaafka jiidan ayaa u weecin doona nooca asalka ah ee tooska ah, kaas oo ka caawin doona iyaga inay helaan qasabno dheeri ah oo la furo. Emailka ugu badan kooxaha waxay kasban doontaa abuuraheeda fursad ay kaga hesho shaqo abuur hal abuur leh istuudiyaha naqshadeynta Emailvision.
Tags: mailkoodanaqshadeynta boostadaPinterest